Mienzaniso yematsamba uye maitiro ekugadzira inoshanda kune yako kambani | ECommerce nhau
Mienzaniso yematsamba uye maitiro ekugadzira inoshanda kune yako kambani
Jose Ignacio | | Email marketing, Marketing
Kamwe kana iye anenge agamuchira atora danho rekuvhura iyo email zvichienderana nechipikirwa mumutsara wenyaya, izvo zvirimo zvemutsamba yako yeemail zvinofanirwa kuendesa pane icho chivimbiso.
Kana mushandirapamwe wako usingaunze pachivimbiso chakamanikidza muverengi kubaya pakutanga, ivo vanozove nezvikonzero zvekuregeredza kwete iyo email chete, asi neako marashi futi. Zvavanofunga zvinogona kunangidzirwa kune chimwe chinhu mubhokisi rako rekunyora, zvichikunyima iwo mukana wekuvatungamira mberi parwendo rwavo rwekutenga.
Isu tese takaiswa mumienzaniso isingaverengeke yematsamba emaimeri asingakoshi, zvinoreva kuti munhu wese anofanira kuve neruzivo rwakanaka rwekuti yakaipa yakaita sei. Email matsamba enhau akajairika, uye rinenge bhizinesi rega rega rinoashandisa neimwe nzira ... saka nei akawanda acho achishaikwa pahunhu?
1 Kugadzirwa kwee-commerce tsamba dzetsamba
2 Chakavanzika? Ipa kukosha
3 Tsamba yako yeemail inofanira kunge iine chinangwa
4 Seta chakakodzera kukoshesa
5 Govera zviwanikwa zvakakodzera
6 Ndeapi mavhidhiyo andinofanira kugovera?
Kugadzirwa kwee-commerce tsamba dzetsamba
Zvinotaridza sekuti kunyangwe ivo vashambadzi vari kuvaka aya makwikwi ekushomeka vanooneswa kune yakaipa mienzaniso, asi vazhinji vacho havakwanise kuuya nezano rakasimba rekuburitsa zvinomanikidza izvo zvichaita kuti vateereri vavo vafarire.
Saka ngatinyurirei mukugadzira yakabudirira eCommerce tsamba dzetsamba dzinozoita kuti vako vanogamuchira vafare ivo vafunga kuenderera nerwendo rwavo nechako chiratidzo.
Simbisa zvinhu uye kukosha mukutakura kwese.
Haasi ese ese marudzi ekutengesa mameseji akagadzirwa akaenzana. Asi iyo pfungwa yezvemukati mekushambadzira kwekushambadzira kutaurirana yakafanana kune ese mapuratifomu: isa zvinhu uye kukosha.
Pane zvimwe zvakawanda zvimwe zvinoenda mukugadzira zvemhando yepamusoro zvemukati zvemukati, senge dhizaini, kusarudzika, uye chikamu chevatengi, asi kana usina chinhu uye kukosha pamwoyo weshoko rako, unozokundikana uye hazvizobatanidzi nevateereri.
Kunyangwe paine akasiyana ecommerce matsamba enhau, kwete chete kune marongerwo anozviita nemazvo, asi kune zvekare vatengi mhinduro dzinopa mubairo iwo anoshanda. Isu takaona kuti kunyangwe iine ye8-yechipiri sefa uye isingafarirwe mukushambadzira kweemail, Gen Z nemamireniyamu zvakafanana vanosarudza kugara vachikurukura nemhando kuburikidza neemail.
Chakavanzika? Ipa kukosha
Kana zvasvika pakutumira maemail ayo nhengo dzechizvarwa chero chipi chingaite nawo, zvakanyanyisa kukosha kupfuura nakare kose kugadzirisa mapuratifomu enhare, sezvo anopfuura makumi mashanu muzana emishandirapamwe anovhurwa parunhare. Uye kukosha kuchiri kiyi, saka zvimwe inbox inoshanduka, seye Gmail kukwidziridzwa tebhu, inogona kunge iri chaiyo, sevanyori vanowanzoona iyo tabo kunyanya pavanoda kutsvaga zvekutengesa madhiri.
Zvese izvi zvinonongedzera kune vateereri vanoshingairira, sezvo mabrand haachafanirwe kukwikwidza zvakananga nezvimwe zvirimo, senge tsamba yemunhu, mumabhokisi etsamba evanogamuchira.
Nyaya hombe ndeyekuti tsamba dzetsamba dzeemail dzinonamatira pamwechete nekuda kwekuti vatengesi vanofunga kuti pane chinhu chakakosha kuti uve nacho.
Iwe unofanirwa kutsanangura zvakajeka zano rako rekuudza nyaya yakabatana iyo inowedzera kukosha kune vamwe vateereri uye inovatungamira kuburikidza nematanho akasiyana ekutenga maitiro. Uye inofanirwa kuumbiridza pamwe nekubatana pamwe nehupamhi hwesimba rako rekushambadzira uye nzira dzekutengesa.
Kana zvikaitwa nemazvo, email kushambadzira ye-e-commerce zvigadzirwa zvinogona kugadzira kubatana kwakakosha uye kusingaperi pakati pemutengi nechiratidzo, kuunza kukosha kwakasimba kune ese mapato. Tarisa uone uyu muenzaniso kubva online yekufambisa kambani Booking.com, iyo inopa vatungamiriri veguta padivi peCTA pekugara.
Tsamba yako yeemail inofanira kunge iine chinangwa
Kana pavanogona, email tsamba dzinogovana nyaya inomanikidza nemuverengi. Iwo anodzidzisa, anodzidzisa, uye anopa rairo yakajeka yekuti muverengi anofanira kuenderera mberi sei kana achida kuwana kukosha kwakawanda kwehupenyu hwake kana zvinangwa zvake.
E-commerce matsamba enhau anobatana zvakananga nevatengi.
Kutanga, tsamba dzetsamba dzeemail dzinogona kuburitsa huwandu hweruzivo nekukurumidza. Nepo ma tweets achiwanzoda kuratidza chinongedzo chechimwe chinhu chakanyanya kukosha, kana mabhodhi emabhodhi anoda kubata vateereri nemeseji dzakakurumbira, matsamba etsamba eemail anogona kuendesa huwandu hunoshamisa hwemashoko anobatsira muverengi mune yavo fomati.
Nepo ecommerce matsamba enhau achiwanzo aine zvinongedzo futi (kazhinji muchimiro cheCTA), anogona zvakare kuve akamira ega ruzivo ruzivo.
Tsamba dzako dzinofanirwa kunge dziri dzega.
Maemail akasimba kwazvo uye anotumirwa kune chaicho muverengi. Paunogadzira terevhizheni kana redhiyo kushambadzira, kana kunyangwe kushambadzira kwewebhusaiti kana vezvenhau chiteshi, iwe hauna chaizvo kutonga kwakawanda pamusoro pekuti ndiani anozviona kupfuura kuongorora huwandu hwevanhu.
Paunotumira tsamba yeemail, uri kuendesa izvo zvemukati kune vamwe vateereri, zvichibvumira kuti zviitwe zvinehunyanzvi uye kusangana neiye anonyorera. Campaign Monitor mutengi Winkelstraat.nl zvikamu zvinyorwa zvaro zvinoenderana nehuwandu hwevanhu uye zvido zvekuratidzira kukwidziridzwa kune vatengi vanofarira.
Izvo zvakakoshawo kuti uzive kuti tsamba dzetsamba dzeemail dzinogona kupa kusangana kunowirirana nevatengi vako, uye kugona kwavo kunogona kuteverwa zvakanyanya uye kuyerwa. Kugadziridza kushambadzira otomatiki kunoita kuti iwe uwane zvinhu zvinoshamisa neemail tsamba ako, uye zvinokwanisika kutaurirana kukosha kazhinji uye zvinobudirira kune vateereri vakawanda nemutengo wakaderera.
Seta chakakodzera kukoshesa
Seta chakakosha kukoshesa email tsamba yekushambadzira.
Tisati tapinda mumhando dzakasiyana uye chaiwo zvikamu zveimwe tsamba huru yeemail, zvakakodzera kuti tiongorore kana iri e-commerce tsamba yekutsva irikukodzera bhizinesi rako.
Nepo tsamba dzetsamba dzeemail iri zano rinoshanda kumabhizinesi mazhinji, pane mamwe mamiriro ezvinhu apo zvinogona kuva zvine zvibereko kutsvaga mimwe mikana, sekungofanana nekutarisa chero chishandiso chekushambadzira. E-commerce kazhinji indasitiri inobatsira kubva mumaemail matsamba, asi kuongororwa kweicho chaicho bhizinesi chesangano rako kuchakuudza kana zano racho ringave rinobhadhara zvikwereti kwauri.
Gadzirisa email tsamba yekushambadzira neakawanda bhizinesi zvinangwa.
Nhanho yekutanga mune chero ongororo yakadaro kunyatso tarisisa kwako bhizinesi zvinangwa. Iwe unofanirwa kutsanangura zvakananga izvo zvaunotarisira kuti ubude kubva munhau yeemail yekushambadzira.
Kana iwe uri kuyedza kukudziridza hukama hwako hwekunyorera zvakanyanya, iwe unogona kuve unobva wabudirira ipapo nekuronga-zvakanaka tsamba yemashambadziro. Zvakare, kana iwe uchida kutyaira shanduko kune yako webhusaiti, kugadzira inoverengeka tsamba yezvinyorwa zvinogona kukubatsira iwe zvine hunyanzvi kutungamira tarisiro yako kuburikidza nerutengi rwekutenga rwendo, zvichikonzera yakakwira muzana muzana yekutengesa pamumwe nemumwe webhusaiti mushanyi.
Neimwe nzira, kana zvinangwa zvako zvikuru zvekushambadzira zvisingaenderane nyore nyore neayo matsamba etsamba akagadzirirwa kuita, zvingave zvirinani kushandisa mari yako kumwe kunhu. Kuedza kuchengetedza tsamba yemavara yeemail isingatsigirwi nezvakakodzera zviwanikwa, kuronga, uye kuchengetedza zvinogona kukuvadza zvakanyanya pane kusatumira matsamba zvachose.
Semuenzaniso, kana chimwe chezvinangwa zvako zvikuru kuri kutyaira kutengesa kwakawanda kuburikidza nehukama, saka iwe unofanirwa kufunga nezvekushandisa zviwanikwa zviwande mukugadzira mhando yemumiriri uye chirongwa chekutengesa zvekare. Asi kune rimwe divi, iwe unogona zvakare kugadzira yakatarwa tsamba tsamba yenhengo dzinopa ruzivo uye nhau kuseri kwezviitiko.
Govera zviwanikwa zvakakodzera
Kumwe kufunga kwakakosha muchisarudzo ichi kutora kuongororwa kwechokwadi kweako maricho zviwanikwa zviwanikwa mukutsvaga yako email tsamba yekutsvagisa zvibodzwa.
Iyo haigone kumanikidzwa zvakakwana: Kana tsamba yako yemushandirapamwe yekumisikidza isarongeka, isina kugadzikana, uye isina basa, saka haisiyo nguva chaiyo yekuenda pasi nenzira iyi. Kushambadzira otomatiki kunogona kukubatsira iwe kuwana mhedzisiro uye kuyera mushandirapamwe wako weemail apo bhizinesi rako richikura, asi iwe uchiri kuda kugona uye kuda kuzvipira zvakakwana kuchirongwa chekuona kubudirira kwazvo.
Usati watanga, funga nezvebhajeti rakajeka, chirongwa chekuwanika cheavo vachapa, uye chirongwa chekuwana rutsigiro rwechirongwa kubva kune dzimwe nzvimbo dzekambani (IT, HR, dhizaini). Paunenge iwe wave nekunzwisisa kwakajeka kwezvinodiwa zveyakarongedzerwa e-newsletter mushandirapamwe, pamwe nezviwanikwa zviripo, iwe unozogona kushanda pamwe nevane chekuita navo vanobatanidzwa kuita sarudzo ine ruzivo nezve kugona kwechirongwa cheako brand.
Paavhareji, vatengesi vanotumira mairi kana mashanu eecommerce newsletter maemail mwedzi wega. Izvi zvinoreva kuti vatengesi veemail vanogadzira akawanda emaimeri gore rega uye vazhinji vatengesi vane zvikwata zvese zvakazvipira kune kwavo basa. Sei? Nekuti email kushambadza manhamba inoratidza kuti email ine yakanyanya kudzoka mukudyara uye yakanyanya kubatanidzwa pakati pekutengesa nzira.
Iko kune ROI iyo inogona kuve nayo
Zvakanaka, saka ecommerce newsletter mishandirapamwe ine basa… asi kungovatumira hakuna kukwana. Ivo vanofanirwa kuve vanokwezva, zvikasadaro ivo vanokutumira iwe kune spam tsamba bhokisi kana vatengi vanozozvinyora zvachose. Saka chii chinotyaira kushambadzira kweemail?
Mapepanhau ane vhidhiyo yezvinyorwa
Vhidhiyo senge svikiro rekushandisa zvemukati iri kungowana mukurumbira. Mabhizinesi anoshandisa vhidhiyo kushambadzira zvinangwa vanoona 41% kuwedzera kwetraffic kune avo masaiti. Asi pane kubata: mhando mhando ... yakawanda. 62% yevatengi vanowanzove nemafungiro asina kunaka echiratidzo chinoburitsa zvakashata zvemukati.
Kushandisa mavhidhiyo mumaemail kunoshanda zvakare. Vanopa vanoti mavhidhiyo anowedzera kudzvanya-kuburikidza chiyero ne55% uye chiyero chekushandurwa ne55% uye 24%. Saka unoisa sei izvi mukati?
Pane nzira dzakasiyana siyana.
Shandisa mufananidzo uine "Play" controller uye ubatanidze kune chaiko vhidhiyo sosi pane yako webhusaiti, blog, kana Youtube chiteshi.
Shandisa iyo animated GIF yakagadzirwa kubva kune yako vhidhiyo mune iyo email iyo inosangana kune chaiko vhidhiyo sosi.
Simbisa vhidhiyo chaiyo muemail kuitira kuti mutengi agone kuitarisa asina kuenda kumwe kunhu.
Ongorora: haazi ese mapuratifomu eemail anotsigira HTML5 tekinoroji uye chete 58% yeavo vanogamuchira vanozokwanisa kutamba vhidhiyo yakaiswa mune iyo email. Vamwe vese, vanosanganisira vashandisi veGmail, Yahoo, uye Outlook vanoona mufananidzo wekuchengetedza. Mufananidzo pamwe ne "Play" controller ndiyo yakachengeteka bheji.
Ndeapi mavhidhiyo andinofanira kugovera?
Mavhidhiyo anofanirwa kukwana zvirimo mugwaro renhau: gadzira yakawedzera kukosha kana kuunza chimwe chinhu. Heano mimwe mienzaniso.
Demo reunganidzwa nyowani
Semuenzaniso, ngatiti iwe uri mutengesi weemail kuGiorgio Armani Fashion House. Yako nyowani email mushandirapamwe inozivisa zvinhu zvitsva kubva muchirimo / zhizha 2016 vakadzi zvipfeko muunganidzwa. Iwe unogona kuwedzera iyo chifananidzo ne "Ridza" kuraira kubva muvhidhiyo yeiyo nyowani muunganidzwa paYouTube kana kugadzira iyo inoratidzika yeGIF mufananidzo uye kuisanganisa iyo kuYouTube.
Pfungwa pane zvekuita nezvinhu zvakatengwa
Ngatiti iwe unotengesa zvitsvuku. Iwe unogona kuwedzera vhidhiyo inotsanangura nzira dzakawanda dzekutakura chigadzirwa chitsva kana chakanyanya kutengesa. Kana, kana iwe ukatengesa zvishongedzo zvevakadzi, wedzera vhidhiyo pamaitiro ekuputira zvidiki zvipo zvakanaka.
Funga nezve hunhu hwemutengi wako. Ndezvipi zvimwe zvehupenyu hwavo zvaunogona kubatsira kudzidzisa kana kuzivisa, kunyanya zvine chekuita nechigadzirwa chako?
Customer Testimonials - Vhura Mavhidhiyo, Ongororo
Kana iwe uine vhidhiyo yevatengi vako vachitaura nezve yako mhando, wedzera iyo. Mhinduro yakanaka inovimbisa vatengi uye inovakurudzira kuti vatenge. Ona iyi vhidhiyo yekuvhura. Inopa chigadzirwa zvakanaka uye ine zviuru zvemaonero. Iwe unogona kushandisa yakatsaurwa email macampaign ekutevera pamwe nevatengi mushure mekutenga uye kuvakurudzira kuti vatumire chimwe chinhu.
Mapepanhau ane mifananidzo yeGIF
Mimhanzi inoshambadzira mameseji anogona kutaurira nyaya uye kutora kutarisisa kwevatengi zvirinani pane chero static mufananidzo. Vashandise pane ako eemail kushambadzira zviitiko kuti uwedzere kubatanidzwa uye kudzvanya.
Iwe unogona kugadzira yakafanana GIF mishandirapamwe nehunyanzvi software. Kana iwe usina hunyanzvi hwakakodzera kana vanhu vari muchikwata chako kuti uite izvi, edza aya akareruka maGIF majenareta:
Matsamba ekuzivisa makwikwi
Zhizha inguva yakanaka yekuzivisa makwikwi. Vanhu vanonzwa vakasununguka, vanoda, uye vakagadzirira varaidzo. Kuti uwane zvakazara kubva pamishandirapamwe yako, gadzira uye upe yakasarudzika online ruzivo kune vashandisi.
Iri kadhi rekutanga rinogona kuuya rinobatsira. Vatengesi veemail vanoishandisa kuitisa marotari kuhwina kutumira kwemahara kana chipo. Kadhi rekutanga rinofinhwa nevose vatengi veemail, kusanganisira ese mavhezheni eAptlook.
Mapepanhau ane kuverenga
Zvekutengesa kwechirimo uye zhizha: shandisa zvishoma zvinopihwa uye zvinosanganisira kuverenga pasi nguva mumaemail ako. Izvo zvinobatsira kana iwe ukatanga yakatemwa-yenguva mushandirapamwe uye zvakare inogadzira kukurumidza kwevatengi kutenga nekukurumidza.
Iwe unogona kugadzira iyi mhando ye timer nemidziyo senge Motionmailapp.com, emailclockstar.com, uye freshelements.com. Ivo vanozogadzira HTML kodhi kuitira kuti iwe ugone kuteedzera uye kunama mune yeHTML kodhi munda weiyo email mhariri.
Mapepanhau ane mazano akasarudzika
Kuwedzera kurudziro mumaemail kunogona kutungamira kune 25% kuwedzera mukutengesa uye ne35% kuwedzera muye-kuburikidza nemitengo. Zvishandiso senge Nosto inogadzira iyo HTML kodhi iyo inokutendera iwe kuti uise zvigadzirwa mune yako email mushandirapamwe zvichibva pane zvakapfuura kutenga.
Aya maemail akasarudzika achauya anobatsira ekusimudzira matsamba enhau pamwe neema post-kutenga maemail, ngoro dzekudzosa maemail, uye mamwe maemail akakonzerwa. Uku ndiko kuyambuka-kutengesa uye kusimudzira mukana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Mienzaniso yematsamba uye maitiro ekugadzira inoshanda kune yako kambani
Artificial Intelligence (AI) mu e-commerce